Musharax Cali Warsame oo kasoo horjeesetey gudiga amniga ee Madaxweyne Faroole magacaabay (Dhegays) – Radio Daljir
Musharax Cali Warsame oo kasoo horjeesetey gudiga amniga ee Madaxweyne Faroole magacaabay (Dhegays)
Nofeembar 15, 2013 4:43 b 0
Nairobi, November 15, 2013 – ?Xili shalay uu Madaxweynaha Puntland magacaabay gudiga amniga ee xiliga doorashadda Puntland ayaa arintaasi waxaa kasoo horjeestey qaar kamid ah Musharaxiinta Puntland.?
Cali X Warsame oo kamid ah raga u ordaya xilka Madaxweyne ee Puntland ayaa nasiib daro ku tilmaamay in Dawladu arimo kuwan oo kale ah ku dhaqaaqdo xili xaalad deg deg ah wadanka ay ka jirto.
“Waxaa nasiib daro ah iyadoo la rabey Dawladu inay xoogeeda u jeediso ?ka hortaga masiibada inay Dawladu uga faa’iidaysato mid kamid ah qodobadii ugu xaasaasi sanaa waxyaabihii la isku hayey,” ayuu yiri Cali X Warsame.
“Waxaan xasuusinayaa Dawlada in maanta kubadda keligood aysan ciyaarayn,” ayuu hadalkiisa raaciyey musharax Cali X Warsame.
Musharaxu wuxuu sheegay inuu hakiyey ololihiisa doorashada si uu dadka ula wadaago dhibaatooyinka ka jira deegaanadda Puntland.
Sidoo kale Cali ayaa sheegay in la isku hayo arimo dhawr ah oo ay kamid yihiin gudiga amniga guud, kan amniga Caasimadda, ka doorashooyinka, Iyo warbaahinta Dawlada, isagoo tilmaamay inuu xili munaasib ah ka hadli doono.
Musharaxiinta u taagan xilka Madaxnimo ee Puntland & xukuumadda talada haysa oo iyana markale raadinaysa inay hesho kalsoonida golaha Wakiiladda cusub ee Puntland ayaa isku khilaafsan hanaanka ay ku socoto qaban qaabada doorasho Puntland looga diyaar garoobayo, lamana oga sida wax ku danbayn doonaan.
Baahin: Axad, 17- Nov 2013 -Caawa Iyo Daljir Weriye Cabdifataax Cumar Geeddi ~ Daljir ~ Galkacyo